विकट गाउँमा चिकित्सकको लर्को – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
विकट गाउँमा चिकित्सकको लर्को
२०७० चैत्र ५, बुधबार ०१:३३ गते
कान्दा । चेकराम चेपाङ सात वर्षदेखि दाँत दुखेको पिडा सहेर बस्न बाध्य थिए । गाउँमा उपचार पाउने सम्भावना थिएन । बजार झरेर अस्पतालमा देखाउन पुरै दुई दिन गुजार्नु पर्दथ्यो । त्यसैले दाँतको पिडाले जति दुःख दिए पनि सहनुको विकल्प थिएन ।
चेकरामले फागुन २९ गतेदेखि त्यो पिडाबाट छुटकारा पाएका छन् । दाँतको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक नै उनको गाउँमा पुगे । घरभन्दा ५० मिटर परको शिविरमा गएर चेकरामले दाँत देखाए । खिइएका दाँतहरु चिकित्सकले उखेलिदिए ।
चितवन जिल्लाको विकट पहाडी गाविस लोथरको वडा नं. ९ कान्दामा पर्छ चेकरामको गाउँ । कान्दामा चेकरामजस्ता दाँतका बिरामी ७० जनाले उपचार पाए । शिविरमा एक जनामात्रै थिएनन् । चारजना विज्ञ चिकित्सकहरु नै सहभागी थिए । विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी पनि त्यही मात्रामा उपस्थित थिए ।
सदरमुकाम भरतपुरबाट जान पुरै एक दिन लाग्ने कान्दा पुग्न गाडी चल्ने बाटो थोरै मात्रै छ । आठ घण्टा जब्वर उकालो हिँडेपछि बल्ल कान्दा पुगिन्छ । त्यस्तो ठाउँमा चिकित्सकहरुको समूहलाई देख्दा गाउँलेहरु औंधी रमाएका थिए । ‘हाम्रा लागि भगवान नै आए सरह भयो’ स्थानीय रत्नबहादुर चेपाङले भने ।
विसं. २०६७ सालको जेठमा जंगलबाट ल्याएको च्याउ पकाएर खाँदा एकै घरका आठजनाको निधन भएको ठाउँ हो कान्दा । सो ठाउँमा समाचार संकलनका लागि पुगेको पत्रकार एकल सिलवालले गाउँलेलाई दुरवस्थाबाट पार लगाउन मितेरी फाउण्डेशन नामक संस्थाबाट विभिन्न कृयाकलापहरु गर्दै आएका छन् ।
फाउण्डेशनकै तत्परतामा यो पटक कान्दामा विषेश स्वास्थ्य शिविर आयोजना भएको हो । शिविरमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समूहले १५ जना पुरूषहरुको स्थायी बन्ध्याकरण गरेको थियो । सर्जन डा.विनोद सिंहले सो टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।
‘११ जना सन्तान भएकाहरुको स्थायी बन्ध्याकरण भएको छ’ डा.सिंहले भने । यसअघि परिवार नियोजनका बारेमा कुनै कार्यक्रम नभएको कान्दामा धेरैका सन्तान पाँचभन्दा बढी नै रहेका छन् । स्थायी बन्ध्याकरणको टोली पुग्दा कान्दावासीमा के हुने हो कसो हुने हो भन्ने कौतुहलता पनि मिसिएको थियो ।
‘बन्ध्याकरणले कमजोर भइन्छ भन्ने धेरैमा भ्रम रहेको छ । लगभग ४० जनाले बन्ध्याकरण गर्लान् भनेको १५ जनामात्रै तयार भए’ स्थानीय कान्देश्वरी राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालकृष्ण थपलियाले भने । अहिलेको शिविरले राम्रो प्रभाव पर्ने र बन्ध्याकरणका सवै भ्रम निवारण हुने उनको विश्वास छ ।
चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका दन्त चिकित्सकहरु डा.अजय शाक्य र डा.रसना श्रेष्ठसहित चारजनाको टोलीले दन्त परीक्षण गरेको थियो । दाँतभन्दा गिजामा धेरैको समस्या देखिएको डा. अजयले जानकारी दिए । स्वास्थ्यसम्बन्धी सामन्य जानकारी पनि गाउँलेहरुलाई नभएको उनले बताए ।
उनले भने ‘समुदाय नै समस्यामा रूमलिएको छ । यहाँ अनगिन्ती समस्याहरु रहेका छन् । दन्त स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या पनि विशिष्ट खालका नै छन् ।’ मेडिकल कलेजले विद्यालय दन्त स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सेवा दिने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । उनको टोलीले ७० जना बिरामीलाई सेवा दिएको थियो ।
रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले गाउँलेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । टोलीले ७४ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर निःशुल्क औषधि वितरणसमेत गरेको डा.पौडेलले जानकारी दिए ।
डा.पौडेल फाउण्डेशनका प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहेका छन् । उनैको संयोजकत्वमा शिविर आयोजना भएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष एकल सिलवालले जानकारी दिए । यसपटक मानव स्वास्थ्यका अलवा पशु स्वास्थ्य परीक्षण र कृषिका लागि प्राङ्गारिक मल तथा बीउ वितरणसमेत भएको सिलवालले बताए ।
जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले पशु स्वास्थ्य प्राविधिक विनोद कर्णलाई कान्दा पठाएको थियो । कर्णले बाख्रालाई पीपीआर खोप दिनुका साथै नाम्ले र जुकाको औषधि खुवाएका थिए । त्यस्तै, चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले उपलब्ध गराएको प्राङ्गारिक मल, गोलभेडा, बोडी र भिण्डीको बीउ कान्दाका स्थानीयलाई वितरण गरिएको थियो ।